Amisom oo Ciidamo ah dalbatay si loola dagaalamo Al-shabaab
Guddiga isku xirka Hoowlgalka Military ee AMISOM ayaa Shirkoodii 22 aas ee ay ku Yeesheen Magaaladda Ardis Ababa waxaa ay ku Dalbadeen in 4,000 Ciidamaddo dheerad ah lagu Soo kordhiyo Howlgalka AMISOM.
Kulanka waxa lagu Adkeeyay in QM iyo Beesha Caalamka ay Si deg deg ah u Taageeraan Ciidamadda Dheraadka ah Si loo kordhiyo Awooddda Ciidamadda Dib na loola Wareego Meelihii Horay ay Shabaab ula Waregeen.
Waxaa ay Sidoo kale Weeydiisteen QM iyo Beesha caalamka in ay in ay Ka Taageeraan Dhinaca Saanadda Gaar ahaan Raashainka iyo Daawadda si waqtiga yare e Dhiman loo Kordhiyo Weeradda islamarkaana loo Soo gabangabeeyo Joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya.
Guddoga isku Xirka Hoowlgalka AMISOM ka sokoow Dalabka Deg-degga ah 4000 ee Askari waxaa ay Sidoo kale isku Raaceen in Guddiga Midowga Africa uu isugu Yimaado magaladda Addis Ababa ee Caasiamadda Ethiopia kualan Qorsheeyn ah Horaanta bisha Soosocota ee Febaraayo si loo soo Gaban gabeeyo Qorshaha isku Xirka Balaarinta Howlagalka Dagaalka Ka dhan ka ah Al-shabaab.
War ay soo Saareen Guddigaan oo Magacooda loo Soogaabiyo MOCC ayey Shaaca uga qaadeen muhiimadda ay ledahay in la Tageero Ciidamadda Doowladda Soomaaliya, Gaar ahaan in loo Diyaariyo Balaarrinta Dagaalka Ka dhan ah Al-shabaab.
Kulanka Howlgalka AMISOM uu ku Dalbaday Ciidamadda Dheeriga ah oo ka dhacay Addis Ababa waxaa Goob jog ka ahaa Dhamaan Taliye-yaasha Ciidamadda Wadamadda Ka qeeyb qaadanaya Howlaglaka waxaa ayna Qireen Baahidda Howlgalku uu uqabo 4000 Ciidamo dheeri ah.